Okuthethwa yiBhayibhile malunga nokuBonakala kunye noBuhle boBuntu
Sifanele Sigxilise Ekuphuculeni Ubuhle Bomzimba
Imfashini nokubonakala kubusa phezulu namhlanje. Ukupapashwa kusasaza ngeendlela zokuphucula indlela esibukeka ngayo imihla ngemihla. Ubonisa ngathi "Yintoni ongayigqokiyo" kunye ne "The Biggest Loser" kubonisa abantu abaguqula indlela abajonga ngayo amanqaku amaninzi. Abantu baxelelwa ukuba ababukele kakuhle, ngoko kutheni ungazami i-botox, utyando lweplastiki njengabaxhasi babo? IBhayibhile isitshela ukuba simele sithathe indlela eyahlukileyo ekubonakaleni kunokuba sifanele ingcamango yoluntu.
Yintoni uThixo ayifumana ebalulekileyo
UThixo akajongi ukubonakala kwethu. Yilokho ngaphakathi ngaphakathi ebaluleke kakhulu kuye. IBhayibhile iyasitshela ukuba ugxininiso lukaThixo lukuhlakulela ubuhle bethu obungaphakathi ukuze luboniswe kuyo yonke into esiyenzayo nento esiyiyo.
1 Samuweli 16: 7 - "INkosi ayibukeli izinto umntu azijonga ngayo. Indoda ibheka ukubonakala kwangaphandle, kodwa iNkosi ibheka intliziyo." (NIV)
Yakobi 1:23 - "Nabani na ophulaphula ilizwi kodwa engenzi oko akutshoyo unjengomntu obheka ubuso bakhe kwisibuko." (NIV)
Kodwa, Abantu abathembekileyo bajonga kakuhle
Ngaba zihlala zihlala? Ukubonakala kwangaphandle akuyona indlela efanelekileyo yokugweba indlela "entle" ngayo umntu. Omnye umzekelo nguTed Bundy. Wayeyindoda enhle kakhulu, ekuthiwa ngowe-1970, wabulala umfazi emva kokuba ebanjwe. Wayengumbulali obulalayo ngenxa yokuba wayenomdla kakhulu kwaye ekhangeleka. Abantu abanjengoTed Bundy bakhonza ukusikhumbuza ukuba izinto ezingaphandle azihlali zihambelana ngaphakathi.
Okubaluleke ngakumbi, jonga kuYesu. Nangu uNyana kaThixo eze emhlabeni njengomntu. Ngaba abantu bayayijonga ukubonakala kwayo kwangaphandle njengento ngaphandle komntu? Cha. Kunoko, waxhonywa esiphambanweni waza wafa. Abantu bakhe abazange bajonge ngaphaya kwembonakalo yangaphandle ukuze babone ubuhle bakhe obungaphakathi kunye nobungcwele.
Mateyu 23:28 - "Ngaphandle nibukeka njengabantu abalungileyo, kodwa ngaphakathi iintliziyo zenu zizaliswa ngohanahaniso nokungahloneli mthetho." (NLT)
Mateyu 7:20 - "Ewe, njengokuba unokwazi ukubonisa umthi ngesityalo sawo, ngoko unokwazi ukubona abantu ngezenzo zabo." (NLT)
Ngoko, Ngaba Kubalulekile Ukujonga Okulungileyo?
Ngelishwa, siphila kwihlabathi elingenasiphelo apho abantu bagweba ngokubonakala. Sonke siyakuthanda ukusho ukuba asikho kwininzi kwaye sonke sijonge ngaphaya kwezinto ezingaphandle, kodwa kuthi sonke sithonyelwa ukubonakala.
Nangona kunjalo, kufuneka sihlale sijonga ngendlela ebonakalayo. IBhayibhile isitshela ukuba kubalulekile ukuzibonakalisa ngokusemandleni, kodwa uThixo akasabizi ukuba senze izinto ezigqithiseleyo. Kubalulekile ukuba sihlale siyazi isizathu sokuba senze izinto esizenzayo ukuze sibukeke kakuhle. Zibuze imibuzo emibini:
Ngaba ugxininiso lwakho ekubonakaleni kwakho kuthatha amehlo akho eNkosini?
Ngaba ugxininise ngakumbi kwisisindo sakho, iimpahla, okanye ukuzenzela kunokuba ungokaThixo?
Ukuba uphendule, "Ewe," kwimibuzo ethile, kufuneka ufune ukujonga ngokubhekiselele kwizinto eziphambili. IBhayibhile iyasitshela ukuba sijonge ngakumbi ezintliziyweni nasezenzweni zethu kunokuba sisethulo neembonakalo zethu.
KwabaseKolose 3:17 - "Nantoni na into oyenzayo okanye yenzayo, makwenziwe egameni leNkosi uYesu, njengoko nibulela kuThixo uYise ngenxa yakhe." (CEV)
IMizekeliso 31:30 - "Intsapho ingakhohlisa, ubuhle buya kuphela, kodwa umfazi ohlonipha uNdikhoyo ufanelekile ukudunyiswa." (CEV)
Ukuqhagamshelana neengcebiso kunye neengcebiso kubafana abangamaKristu
UkuConsa Iingcamango zokuNcedisa iSigama sabaFundi
Amanatees: Amantombazana amnandi aseLwandle